Ny marketing ara-tsosialy dia tsy mahomby | Martech Zone
Ny marketing ara-tsosialy dia tsy mahomby
Alakamisy 24 martsa 2011 Talata, Novambra 29, 2011 Douglas Karr
Tamin'ny taon-dasa, nanoratra lahatsoratra aho ho valin'ny Jonathan Salem Baskin, manalavitra ny fiheverany fa Social Media mety ho mampidi-doza ho an'ny orinasa. (Tena nifanaraka taminy tamin'ny resaka maro aho).
Tamin'ity indray mitoraka ity - raha ny hevitro - dia nofantsihan'Atoa Baskin izany. Ny orinasa rehetra dia mitsambikina amin'ny haino aman-jery sosialy, fampitomboana ny fandaniana amin'ny marketing amin'io sehatra io, saingy vitsy no mahita ny valiny nantenain'izy ireo.
Burger King dia namono tamin'ny alàlan'ny CMO roa ary nandefa maso i Crispin Porter & Bogusky taorian'ny famoahana fampielezan-kevitra tao amin'ny Facebook sy horonan-tsarimihetsika viraliny izay nahasarika ny sain'ny olona raha nahita ny varotra enina nisesy nihena ny varotra. tamin'ny alalan'ny fomba fiteny
Tamin'ny fihaonambe sy tamin'ny mpiara-miasa dia nanohitra azy ireo matetika aho mba hanome porofo tsy azo lavina fa ny fampielezana haino aman-jery sosialy dia azo foronina tsara, kasaina hatao ary hatao miaraka amin'ny andrasana famerenam-bola. Ny lakile eto dia andrasana… Azoko atao ny mametraka ny andrasana amin'ny mailaka, mandoa isan-tsindry ary manao fanentanana amin'ny milina fikarohana rehefa mandeha ny fotoana… fa tsy sosialy velively. Izahay dia mbola tsy namoaka ny algorithm mazika mba hidirana amin'ny psychy ara-tsosialy.
Tsy hoe tsy mino aho hoe misy sarobidy amin'ny haino aman-jery sosialy…. Saingy heveriko fa misy singa roa lehibe amin'ny fampiasana media sosialy amin'ny fomba mahomby:
Ny orinasa maniry hitrandraka ara-tsosialy tsy maintsy efa sosialy! Ny fanasana ny olon-drehetra amin'ny resaka iray ary avy eo tsy mamaly, manafina, na manandrana mamily ny valiny dia mety hanimba bebe kokoa noho ny tsara. Betsaka, raha tsy izy rehetra, ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy mahomby izay nosoratan'i pundits dia an'ny orinasa efa sosialy… talohan'ny nahalalan'ny mpampita vaovao.
Ny orinasa maniry hitrandraka ara-tsosialy tsy maintsy manana tetika marketing mahomby amin'ny Internet efa eo amin'ny toerany. Izany hoe, tokony hanana tranokala lehibe, bilaogy mivaingana izy ireo, pejy fitetezana avo lenta, manampahefana misahana ny milina fikarohana ary paikady mailaka mitaiza mahomby.
Raha manandrana ianao manararaotra media sosialy alohan'ny hampiasanao amin'ny fomba mandaitra, ohatra, programa fikolokoloana hanakatona ny fitarihana izay efa namolavola fifandraisana sy izay nisoratra anarana taminao… voa fotsiny ianao. Mora kokoa ny manakatona ny orinasa hiala amin'ireo fifandraisana efa tafaorina noho ny manipy fampiharana mailaka lafo vidy ao amin'ny Facebook ary manantena valiny tsara sy fiverenana amin'ny fampiasam-bola! (Tsy nanampy tamin'ny fivarotana burger ny akoho amam-borona.)
mino izany aho media sosialy dia fanamafisam-peo. Rehefa te hampitombo hafatra ianao dia tsy maintsy manana hafatra mifandraika amin'izany, mpihaino hizara azy, ary toerana hahatongavan'ireo mpihaino ireo. Ataovy amin'ny toerany ny marika hafa rehetra, ny varotra miditra, ny fanatsarana ny motera fikarohana, ary na ny bilaogy ataon'ny orinasa alohan'ny hanombohanao manary vola amin'ny programa media sosialy mihitatra aza!
Tsy mino aho fa ny media sosialy dia maty toy ny paikady marketing… Heveriko fa diso lalana foana io ho ivon'ny paikady rehefa tsy tokony.
Tags: jonathan salem baskinhaino aman-jery sosialySocial Media Marketing
Disqus: Tompondakan'ny rafitra maneho hevitra
Mar 24, 2011 ao amin'ny 5: PM PM
Douglas, tsy afaka nifanaraka bebe kokoa tamin'ny famakafakana lalindalina kokoa nataonao aho. "Ny hafatra no (mbola) hafatra" na inona na inona medium, marina?
Somary, Jonathan… Mieritreritra aho fa misy ifandraisany amin'izy ireo ny mpampita vaovao tsirairay ary mitaky ny hamoronana ilay hafatra hitodihana any amin'izay mahazo azy. Ohatra, ny fikarohana 'mividy iPad namboarina' dia tokony hipetraka any amin'izay hividianan'ilay olona avy hatrany… fa ny hafatra ho an'ny doka Facebook dia mety ho 'iPads namboarina miaraka amin'ny garantie'. Ny tanjon'ny fikarohana dia ny mividy, ny tanjon'ny doka dia ny handravaka ny sain'ny olona tsy ampoizina.
Lahatsoratra mahafinaritra! Izaho dia niandry olona manana polipitra mpampijaly hanomboka hanova kely ireo mpanao vazivazy ireo eny am-pivarotana 'fifampiraharahana'. 🙂 Toa be ny tsy an'asa, tototry ny mpanolo-tsaina ny varotra izahay. Ary rehefa tsy mahomby izy ireo amin'ny maha consultant marketing azy ireo dia nomenay an'ity zavatra vaovao antsoina hoe 'consultant media sosialy' ity.
Mar 24, 2011 ao amin'ny 8: PM PM
Nikaroka an'io teny io aho… amplifier. Izay no manosika azy. Ny tetibola media sosialy dia tsy tokony hihoatra ny vidiny ary tokony misy tanjona misy dikany, saingy mampiahiahy ny fikajiana ny ROI raha ny tsara indrindra. Tsy mieritreritra ny haino aman-jery sosialy ho toy ny sehatra fivarotana aho ary orinasa azo porofoina fa manandrana mahita fiverenana kely sy fifamatorana kely. Ireo orinasa izay miditra amin'ny sehatra misy azy ireo mahafantatra ny tsenany sy miresaka momba ny olan'ny tsenany ary mahatratra ny “leadership leadership” sns… dia mampivelatra ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika izay azo zahana amin'ny varotra indraindray, saingy mety hisy fiatraikany fotsiny izany amin'ny fotoanan'ny fanapahan-kevitra.
Ohatra iray ny orinasa kiraro raha manaraka ny kiraro Toms ao amin'ny Twitter ianao ary koa ny kiraro Nike dia mety ho hitanao ny nametrahan'ny Nike momba ny kiraro miverina Air Jordan amin'ny $ 100 fotsiny ny mpivady ary mety ho hitanao ihany koa ny lahatsoratra an'ny Toms Shoes momba ny tsy fitovizan'ny kiraro amin'ny fiainan'ny zaza sy ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny tanjona hametrahana kiraro amin'ny tongotra roa eto an-tany. Rehefa mankany amin'ny fivarotana kiraro ianao ary mahita ny Toms Shoes eo akaikin'ny fiverenan'ny Air Jordan izay resaka mety hahalasa saina anao? Ny volako dia amin'ny resaka toa tsy misy fitiavan-tena momba ny fomba hanampianao amin'ny filan'ny sasany ny filàna fototra dia hisy fiheverana maharitra kokoa noho ny resaka $ 100 izay mahatonga anao hahatsapa ho toy ny tanora indray.
Ny ahy 2 ¢ fotsiny
Mar 25, 2011 amin'ny 10: 31 AM
Douglas voaresaka tsara, ary marina eo amin'ny marika ho an'ny orinasa marobe.
Ny sombin-javatrao dia milaza mazava tsara ny filàna mitohy fampidirana ireo hetsika fivarotana orinasa amina sehatra maro. Ho an'ny Internet manokana, tena tiako ny rafitra marketing automated toa ny tolotra Hubspot, satria mikasika ny teboka rehetra nolazainao izy ireo.
Mar 25, 2011 amin'ny 11: 27 AM
Zava-dehibe ihany koa ny fampidirana ny mpihaino amin'ny sehatra manokana kokoa, izay mety ho sarotra ho an'ny orinasa lehibe kokoa. Ahoana no fomba hamoronana fifandraisana amin'ireo mpanjifa mety an-tapitrisany? Ahoana no ampifandraisinao amin'ny vokatrao fa tsy ny mpifaninana aminao, raha ny zavatra tokana mampiavaka anao amin'ny hafa dia ny vidiny? Ny maha-izy azy ary ny fifandraisana. Orinasa lehibe dia mety ho lasa «lasa» na «ambony» haino aman-jery sosialy afa-tsy ny fampiasana ny tambajotran-tserasera ho an'ny fandatsaham-bato, ary ny famoahana ny fifampiraharahana manokana. Ny ahy .02 fotsiny
Mar 25, 2011 ao amin'ny 6: PM PM
Io dia notenenin'ny olona iray izay nahavita nanao hetsika fanentanana firy? Manontany tena aho hoe. Tsy hidera anao aho satria nitsambikina tamin'ny haino aman-jery anti-sosialy. Ny mpiara-miasa aminao rehetra dia afaka mahita izay dikany amin'izany fa ho hitany fa heveriko fa manao izay ataon'ny besinimaro ianao ary mahita izay tianao ho hita. Raha ny media sosialy eny dia manetsika ny mpanao gazety ratsy: http://bit.ly/bad-press - izany fotsiny dia fiasan'ny fitaovana iray mitazona anao ho marin-toetra.
Eny, hahazoana antoka fa fitaovana matanjaka ny media sosialy fa tsy hihemotra. Ary eny, napetrakao ireo teboka fiarovan-tena ampy mba tsy hanolo-tena tanteraka amin'ny hevitrao. Saingy ity fanambarana lamba firakotra ity dia tsy inona fa ny afo mikorontana.
Ny fampiasana le grafika sosialy dia mbola vaovao amin'ny fomba rehetra amin'ny mpanao dokam-barotra sy ny mpivarotra nentim-paharazana. Takatr'izy ireo ny PUSH, BIG, IZAO, VAROTRA, MAIMAIM-PO, Dihy! Ary tsy hoe "fanaovana resadresaka" fotsiny ny fahatakarana ny fiarahamonina, ny fandraisana anjara ary ny fananganana marika marika voajanahary amin'ny alàlan'ny fifandefasan-kafatra.
Ekeko fa nisy ny tsy fahombiazana. Fa azo antoka izao na mihoatra na kely aza ny fanaparitahana amin'ny media nentin-drazana. Oh ary BTW, "Akoho mpanompo" tsy akoho amam-bolo ary raha mbola miresaka momba izany ianao - noho ny nahomby.
Amin'izao fotoana izao, ny mpanjifanay rehetra dia manana fifandraisana ara-tsosialy ao anatin'ny paikadiny ankapobeny. Ary koa, ampahany lehibe amin'ny tetikadiko marketing amin'ny Internet ihany koa izany. Tsy 'mitsambikina amin'ny sariety' aho. Ireo mpivarotra manan-talenta izay mila mahazo valiny ho an'ny mpanjifany dia tsy 'mitsambikina'. Izahay dia mijery hoe ahoana no ahafahana manararaotra ara-dalàna ny mpanelanelana fa tsy mahafoy ny fomba fanao miasa satria Wired na Inc dia manondro ny 'zavatra lehibe manaraka'.
Ary ny Subservient Chicken dia tsy nahomby - ohatra tsara amin'ny marketing tsy mahomby. Ny fisarihana mpanatrika marobe tsy misy dikany dia TSY tokony hataon'ny mpivarotra.
Mar 25, 2011 ao amin'ny 7: PM PM
Valiny azo ampiharina io, saingy tsy hita taratra amin'ny antontan-taratasinao. Ary miombon-kevitra amin'ny fanombanana ihany koa aho fa mampiasa ny medium izahay. Kenneth Cole, Groupon, Red Cross, Ford ary ny marika mahomby rehetra izay niditra an-tsehatra tamin'ny fiaraha-monina dia tsy maintsy niatrika fahasahiranana haingana kokoa noho ny taloha tany amin'ny RT. Saingy marina ny teninao fa tsy misy "algorithm majika" ary tsy hisy mihitsy fomba iray hamaritana mialoha ny valin'ny fihetsiketsehana demo momba ny fampielezan-kevitra iray ary manantena ny hanapaka azy ireo amin'ny pasipaoro ratsy (toa ny) tamin'ny media sosialy.
Ka 'maninona no tsy mahomby ny marketing ara-tsosialy'?
15 tapitrisa no mahatratra ny 5 andro voalohany
7,000,000 hevitra momba ny fandefasana
Hetsika 450 tapitrisa
Ralehilahy iriko mba hahavita zavatra ratsy toa izany. Tokony hankahala an'i Playa!
Tsara indrindra ~
Mar 25, 2011 ao amin'ny 8: PM PM
Raha afaka mandoa ny faktioranao ny fiheverana dia heveriko fa tsara izany! Ho an'i Burger King, tsy izany no olana - izany no antony nilaozana ny fampielezan-kevitra ary noroahina ilay masoivoho.
Mar 29, 2011 amin'ny 1: 38 AM
Raha tsy mahomby anao ny marketing ara-tsosialy na tsy manampy anao, dia farafaharatsiny mba hitady zavatra hisolo ny media sosialy. Mitadiava rafitra mandeha ho azy afaka manampy anao amin'ny paikadinao amin'ny varotra, Toy ny hitako tao amin'ny advancedwebads. manome serivisy sy tsindry tsy voafetra ny serivisy.